Mpampita teny… ampitaiko ny fijoroana vavolombelon’ireo izay manoratra… · Global Voices teny Malagasy
Mpampita teny… ampitaiko ny fijoroana vavolombelon’ireo izay manoratra…
Voadika ny 25 Jona 2019 14:02 GMT
Tamin’ny taona 2008 aho no nahita ny GV, raha nanao ny famoahana ny lohatenin-gazety iraisam-pirenena ho an'ny tetikasa OLPC (One Laptop Per Child) niaraka tamin’ilay lahatsoratra hoe : ‘’Miha-lehibe ao anatin'ny Fibilaogina any ambanivohitr'i Orogoay ‘’. Tamin’izany fotoana izany, tsy mbola voadika ny lahatsoratra, ary nampalahelo satria tena nahaliana anefa ny votoatiny.
Noho ny antso iray nalefan’ny tompon’andraikitry ny sehatra fifanakalozan-kevitra ahitana ireo mpandika teny nandray anjara tamin’ny fametrahana ny tetikasa OLPC no nandikako lahatsoratra voalohany tamin’ny taona 2011. Momba ilay bilaogera Ejipsiana iray, Alaa Abdel Fattah no resaka, izay navitrika tao amin’ny vondrom-piarahamonin'ny mpandika tenin'ny rindrambaiko malalaka, ary nogadraina tsy ara-drariny. Izany no nandikako teny ho an'ny GV Advocacy sy nidirako tao amin’ny ekipa mahafinaritry ny GV Frantsay. Nahafaly ahy ny nahafantatra taorian’izay fa novotsotra i Alaa Abdel Fattah ( vonjimaika satria nosamborina indray izy avy eo).
3 taona taty aoriana, momba ny lohahevitra nitovy tamin'izany ihany ny lahatsoratra nosoratako farany. Tsy kisendrasendra tsotra fotsiny ny vaovao. Mbola manan-danja hatrany ny olan'ny famoretana atao amin’ireo olona na vondrona miaro ny fahalalaham-pitenenana sy ny demaokrasia.
Nahoana ary no liana, indrindra, amin'ireo olona izay manoratra bilaogin-dahatsoratra any amin’ny tontolo hafa? Zon’olombelona fototra tsotra izao ity asan’ny olom-pirenena manohana ny fahalalaham-pitenenana ity. Ny fahafahantsika manokana no voakasika ankolaka rehefa nohitsakitsahana sy nanaovana famoretana izany. Ny mampahafantatra sy ny mizara amin’ny alàlan'ny fandikanteny ny toe-javatra sy ny ady ataon’ireo olona ireo dia azo antoka fa rano mitete ao anaty ranomasimbe manitsakitsaka ny fahafahana kanefa hetsika tsy maintsy ilaina izany ho antsika tsirairay .
Tsy hoe manala ny gadran'olombelona fotsiny ihany ny atao hoe fahafahana fa ny miaina amin'ny fomba izay manaja sy manamafy ny fahalalahan'ny hafa ihany koa.” (Nelson Mandela).
Iza ary aho no miasa-saina momba izany? Mpampita teny, mpandika teny momba ny fiofanana sy ny asa. Mpampianatra-mpikaroka momba ny fiteny teo aloha, liana amin'ny fomba namokarana, nandraisana sy nanakalozana ny teny. Farany, fantatro fa ilay hafatra mihitsy ihany koa no zava-dehibe. Noho izany, nahatsikaritra aho, raha niainga tamin'ny endrika mankany amin'ny heviny, fa tombontsoa arovan'ireo manana fahefana fatratra amin'ny zavatra sy ny olona ny fanehoan-kevitra. Matetika iharan'ny famoretana sy voahenjika ireo izay tsy manana ireo zo hiteny ireo noho ny fahasahian'izy ireo mitaky izany zo fototra izany. Indraindray, ary matetika izy ireo no mizaka ny fizorany mankany amin'ny fahalalahany na mihatra aman'aina mihitsy aza.
Sary natolotr'i Rutahsa Adventures www.rutahsa.com – nahazoana alàlana avy amin'ny mpisera:Leonard G. tao amin'ny en.wikipedia [CC-BY-SA-1.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0)], tamin'ny alàlan'ny Wikimedia Commons
Saingy tsy irery izy ireo fa miaraka sy tohanan’ireo mpiampita sy mpanamboatra tetezana marobe …mampifandray ny olombelona sy ny hevitra.
16 ora izay